नेदरल्याण्डलाई हराएर नेपाल विश्वकप छनोटमा... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
नेदरल्याण्डलाई हराएर नेपाल विश्वकप छनोटमा सातौं होला?
जिम्बाम्बेमा जारी आईसीसी विश्वकप छनोटको सातौं स्थानका लागि आज नेपालले नेदरल्याण्ड्सको सामना गर्दैछ।
एकदिवसीय मान्यता पाएपछि नेपाली टोली उत्साहित छ भने प्रतियोगितामा खराव लयमा देखिएको नेदरल्याण्ड्स सुपर सिक्समा पुग्न नसकेपछि सातौ स्थानका लागि खेल्नुपरेको छ।
बिहीबार पपुवा न्यूगिनीबिरुद्ध ६ विकेटको जित दर्ता गर्नु र नेदरल्याण्ड्सले हङकङलाई हराउनुमा नेपालले एकदिवशीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ।
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टू मा अविस्मरणीय प्रदर्शन गरेलगत्तै विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा हाशिल गरेको यस सफलताले नेपाली समर्थक र क्रिकेटर दुवै हर्षित छन् ।
गत वर्ष आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेसँगै टेष्ट राष्ट्रहरुपछि १३औं नम्बरमा ओडीआई स्टाटस पाएको थियो, विश्वकप छनोटमा उसको महत्वाकांक्षा सातौं स्थानका लागि खेल्नेभन्दा धेरै नै माथि थियो । तर, विश्वकप छनोटको सातौं स्थानका लागि खेल्नुमै उसले गर्व गर्नुपर्ने अबस्था देखियो।
नेपाल र नेदरल्याण्ड दुवैले ४ वर्षको लागि एकदिवसीय मान्यता पाइसके पनि दुवै बीचको खेल लिस्ट ‘ए’ नै हुनेछ। छनोट प्रतियोगिता पछि मात्रै दुवै देशको खेलले एकदिवसीय मान्यता पाउनेछ।
नेदरल्याण्डले प्लेअफमा हङकङलाई ४४ रनले हराएको थियो भने समूह चरणमा आयरल्याण्ड, युएई र वेस्ट इन्डिजसँग हार बेहोर्दै सुपर सिक्स पुग्न असफल भएको थियो।
पपुवा न्यूगिनीसँग जित हात पारेको नेदरल्याण्ड नेपाललाई हराउँदै आफू उत्कृष्ट भएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ।
समूह चरणमा जिम्बाबे, स्कटल्याण्ड र अफगानिस्तानसँग पराजित भएको नेपालले महत्वपूर्ण खेलमा हङकङलाई हराए पनि अफगानिस्तानसँग नेट रन रेटमा पछि पर्दै सुपर सिक्स पुग्न असफल भएको थियो।
त्यसपछि प्लेअफ खेलमा पपुवा न्यूगिनीलाई ६ विकेटले पराजित गरेको नेपाल आज नेदरल्याण्डलाई हराएर आफू एक दिवसीयका लागि तयार रहेको जनाउ दिने तयारीमा छ।
के नेपालले अब भारत र अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय टोलीसँग खेल्न पाउँछ?
नेपाल र नेदरल्याण्ड अहिलेसम्म चार पटक आमनेसामने भएका छन्। जसमा दुबै टोलीले समान २-२ खेल जितेका छन्।
नेपालको अन्तिम भेट विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको खेलमा भएको थियो। २०१६ अगस्टमा नेदरल्याण्डमा सम्पन्न २ वटा खेलमा दुवै टिमले १/१ खेल जितेको थियो।
त्यसभन्दा अघि सन् २०१५मा नामिबियामा भएको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन-२ मा नेपालले नेदरल्याण्डलाई २ विकेटले पराजित गरेको थियो। यसअघि सन् २०१४ को न्युजिल्याण्ड विश्वकप छनोटमा सातौं स्थानको लागि भएको प्ले-अफ सेमिफाइनल नेदरल्याण्डले जितेको थियो।
डब्लुसिएल च्याम्पियनसिप– अगस्ट २०१६
नेपाल – ९४
नेदरल्यान्ड्स ७ विकेटले विजयी
डिभिजन–२, जनावरी २०१५
नेदरल्यान्ड्स – १५८
विश्वकप छनोट सातौं स्थान प्लेअफ जनावरी २०१४
नेदरल्यान्ड्स – १७२/३
समूह चरणमा नेपालका कप्तान पारस खड्काले तारिफयोग्य ब्याटिङ गरेका छन्। पिएनजीविरूद्धको प्ले अफमा सस्तैमा आउट भएका उनले समूह चरणमा दुई अर्धशतक प्रहार गरेका छन्।
स्कटल्यान्ड विरुद्ध ६३ तथा अफगानिस्तान विरुद्ध ७५ रन प्रहार गरेका कप्तान खड्का नेपाली टोलीका भरपर्दा अलराउण्डर हुन्।
यसअघि समूहचरणमै जिम्बावे विरुद्धको पहिलो खेलमा ४० रन जोडेका उनले हङकङ विरुद्ध ११ रनमै आउट भए। आइसिसिले समेत प्रतियोगिताका उत्कृष्ट ११को सूचीमा खड्कालाई राखेको छ।
दीपेन्द्रसिंह ऐरी (नेपाल)
प्रतियोगिताका सुरुवाती खेलमा ब्याटिङमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेका युवा खेलाडी ऐरी पपुवा न्युगिनी विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाए।
पपुवा न्युगिनी विरुद्ध उनले अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दा नेपालको जित सम्भव भएको हो। उनले ४ विकेट लिँदा पपुवा न्युगिनी सस्तैमा समेटिएको थियो। ब्याटिङमा पनि उनले नटआउट ५० रन जोड्दा नेपालले सहज जित हात पारेको थियो।
रोइलोफ भान डेर मेर्वे (द नेदरल्यान्ड्स)
देब्रे हाते स्पिनर मेर्वेले विश्वकप छनोटका पाँच खेलमा १२ विकेट लिइसकेका छन्। दुई खेलमा ४–४ विकेट लिएका उनी अलराउन्ड प्रदर्शन गर्न सक्छन् लिस्ट ‘ए’को खेलमा ८ अर्धशतक र एक शतक प्रहार गरिसकेका उनी नेपाल विरुद्ध शनिबार घातक बन्न सक्छन्।
प्रतियोगितामा यसअघिका खेलमा मौका नपाएका शक्ति गौचन र ललित सिंह भण्डारीले आजको अन्तिम खेलमा मौका पाउने सम्भावना छ।
पिटर बोरेन (कप्तान), वेस्ले बारेसी (विकेटकिपर), वेन कुपर, बास डे लिडी, स्कट इडवार्ड, भिभियन किङमा, फ्रेड क्लासे,न म्याक ओडउड, पिटर सिलर, सेन स्नाटर, रायन टेन डजचाटे, टिम भान डेर गुग्टेन, रोइलोफ भान मेर्वे, पाउल भान मिकेरेम, सिकन्दर जुल्फिकर।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २, २०७४, १०:३९:४२
बैङ्लोर चेन्नईसँग ७ विकेटले पराजित, विराटले बनाए केवल ६ रन
सबै आइपिएल म्याच नखेल्न सक्ने कोहलीको भनाइ, यस्तो दिए कारण
भारतका पूर्वक्रिकेटर गौतम गम्भीर भाजपामा
के सचिनको कीर्तिमान तोड्लान त विराटले?: यस्तो छ कालिसको बुझाइ
युवराजलाई किन्नु पछाडि यस्तो छ मुम्बई इन्डियन्सको रणनीति, जहिरले गरे खुलासा
'कोहली चलाख र रणनीतिक कप्तान होइनन्'